Umqwayizi, 23, unezimoto ezingu-10 nemizi emibili | News24
Umqwayizi, 23, unezimoto ezingu-10 nemizi emibili
Harare - Umqwayizi oneminyaka engu-23 ubudala waseHarare uzishaye isifuba ngokubanezimoto eziyishumi nemizi emibili eHarare naseBindura.
UBelinda Preciuos Kufa odume ngelika-Anesu emgwaqeni uthi usebenza kancono kunabanye abaqwayizi.
OLUNYE UDABA: Umqwayizi osebenza ngesikhathi
"Kuyiqiniso nginezimoto eziyishumi yingakho ozakwethu benenkinga ngempumelelo yami, angiwafensi amakhasimende njengoba kushiwo.Ngizwile ukuthi ozakwethu bakhathazekile ngokuphumelela kwami futhi yingoba angizithathi izidakamizwa futhi angiwuphuzi ubhiya njengabo."
"Impela ngingumqwayizi, amakhasimende ami ngiwaphatha kahle ngize ngiwabhocabhoce ngoba ngakufundela. Nginamabhizinisi, ngiyaqashisha ngezimoto futhi nginemizi eHarare naseBindura," kusho uKufa etshela iMyZimbabwe.
"Isigcino bazothi nginomuthi nkengoba maduze nje ngizoqashisa ngezindawo zokuhlala kanti akunjalo ngenengqondo, imali engiyithola ekuqwayizeni ngiyisebenzisa ngendlela."